Wp/blk/ယာ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ယာ
ယာ (အဲင်းကလေတ်: Opium, poppy tears)( သိပ္ပံမဉ်ꩻ: Lachryma papaveris) (မန်း: ဘိန်း) ဖေင်ꩻ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အဝ်ႏယာ(ဖေင်ꩻ)မွူးအရာႏအစီႏကို လꩻလွဉ်ဒါႏ အစီႏအမန်ꩻတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ ယာမွူးနဝ်ꩻ ကဝ်ႏဒျာႏ ဖေဖော်လာရီရပ်ခိန်ႏတဲင် ခလားခမ်းကလင်ꩻ အရာႏဖုံႏ ဖြားလꩻထိုꩻစွဉ်ႏ ထူႏလꩻစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ယာမွူးပေႏတန်နဝ်ꩻ နုဲင်းဒျာႏကဝ်ႏမွူးပေႏပုင်ႏ အဝ်ႏဒျာႏ လိုꩻငင်းဒေင်မာꩻလ့ရပ် ယဟန်ႏကဟဝ်ကိုတဲ့ ပေါင်းထိုꩻယိန်းနဝ်ꩻသွူ။ အကဝ်ႏနဝ်ꩻ အဗွာ၊ တနျာႏ၊ တနျာႏအွူႏ စတဲင်အရောင်ႏဖုံႏအဝ်ႏလဲ့ အရာႏမိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အရောင်ႏချိုသွူ။ ယာမွူးနဝ်ꩻ ကောပ်စွဉ်ႏ ခံႏနွောင်ꩻတဝ်း ခမ်းခါရာႏသီႏဥတု ခမ်းထီတံႏဖုံႏတဲင် ခလားခမ်းကလင်ꩻ ထူႏထိုꩻလို့ဗာႏ အစီႏဖုံႏသွူ။
စဲင်းသေႏချာႏတဝ်း, possibly Asia Minor, or Spain, southern France and northwestern Africa
တခမ်ႏဖာႏလွုမ်း (#1: ဥရောပ)
တကီႏလိုႏ US$၃,၀၀၀ (as of 2002[update])
တကီႏလိုႏ US$၁၆,၀၀၀ (as of 2002[update])
ထူႏယာစီႏပုင်ႏစံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကဲစ်ꩻနေးအရာႏအပီလောင်းတဲင် ကဝ်ႏကဲစ်ꩻခြောင်ꩻကို ကထန်ႏလွဉ်ဒါႏ အစီႏယို ထူႏသိမ်ꩻဟဝ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ထူႏယာစီႏသားနဝ်ꩻ နီနီꩻတလဲင်ႏ မွေးတဝ်းလဲ့ သိုမ်နီꩻတလဲင်ႏ ထွားစွစ်ꩻစွစ်ꩻသွူ စွုမ်ႏမွူးမွူးတဲင် ကဲစ်ဖေႏဗာႏ ယာရာႏသွူ။ ကဲစ်ဖေႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏ ၂ လဲင်ႏ ဗꩻလွေꩻ ၆ လဲင်ႏရပ်သွူ။ အဝ်ႏယာရာႏလောင်း ကဲစ်ꩻထွူကလꩻလွဉ်ဒါႏ ယာစီႏဖုံႏနဝ်ꩻ သော့ꩻတောမ်ႏတကောက်ꩻတပျာႏကိုတဲင် အွဉ်ႏလိုဗာႏ ယာခိုးကို ၄ ပတ်ရပ်တဲင် အစီႏမန်ꩻနဝ်ꩻ သဲင်လွဉ် ထွာလွဉ်စွဉ်ႏ အဆွော့ꩻသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ထွူတွော့ꩻ နိုတ်ꩻစိမ်ႏဖေႏထွူ လုင်ꩻနေးတောမ်ႏ ပဉ်ခြုံးခြုံးပဉ်လုင်ꩻလုင်ꩻတဲင် ဖေႏကသဲင်မွေးမွေးတာႏ အွဉ်ႏလိုထဲင်းဗာႏယင်း မွူးရောင်ႏယာခိုးကိုသွူ။ ယာခြုံးဖုံႏ မဉ်ႏသဲင်မွေးထွူနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်သော့ꩻ အခင်ႏလမ်းတတွိုက်ကိုတဲင် သိမ်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ အခိန်ႏညနေင်ႏလာနေးသွူ။
ယာယို မဉ်ႏထွားတသီႏပညာႏဖဲ့ꩻအသုင်ꩻ လိုꩻသီးခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏနဝ်ꩻ ထွာစွဉ်ႏ တသီႏဖိုꩻတန်ႏအရေꩻတန်ဒါႏ တခြိုꩻဒျာႏလဲ့ ကသုင်ꩻစွယ်ꩻဒါႏ အံႏ၊ တရေ့ꩻဒါႏ ယာသားတာႏနဝ်ꩻ ထွာအီစွဉ်ႏ ယာကားသားတကာႏတဝ်း ခွိုက်လွဉ်ပါစွဉ်ႏ နမ်းအသက်သွီႏ အန်ႏတရာယ်ႏဖုံႏသွူ။ ပွိုးတောမ်ႏ မဲဉ်ဒို့ꩻတခြို့ꩻလို့လꩻ ဖြေꩻစာကူꩻကား ယာတခြိုꩻတာႏ တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻ သစ္စာႏကုဲင်ထိုꩻဝင်ꩻ၊ တစွိုꩻတောမ်ႏတစွိုꩻ တခမ်းတောမ်ႏတခမ်း လဲင်ꩻထွာဖိုဗာႏ စဲင်ꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻဖုံႏသွူ။ ယာနဝ်ႏ ပွိုးစွဉ်ႏအန်ႏတရာယ်ႏတန်ငါႏတဲင် ကမ္ဘာႏလောင်း ခမ်းထီဗွေႏ အစိုႏရသီး အဝ်ႏရဲးခါꩻဗာႏနေးတောမ်ႏ ဥပဒေႏအမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ အစိုႏရသီး အဝ်ႏရဲးကမ်းခြေင်းခါꩻစွဉ်ႏလဲ့ ဆို့ꩻယာသား အံႏယာသား ကားယာသား တရေ့ꩻယာသား အဝ်ႏအာဒွိုန်းက ဗꩻတွိုႏယိုခါနဝ်ꩻသွူ။ ယာယို မဉ်ႏထူႏသုင်ꩻဒါႏတဝ်းနဝ်ꩻ ထွာအီ လိုꩻကုဲင်လိုꩻဗား ထွာဒါႏ အကျိုꩻယုတ် ထွာဒါႏ သက်အန်ႏတရာယ်ႏနဝ်ꩻ မဲဉ်ႏဒျာႏလဲ့ မဉ်ႏထွား တသီႏပညာႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻသီး ကခံႏစာꩻဗာႏဒါႏ ရောႏဂါႏထာꩻဆာတာႏ သက်သာႏအီဟဝ်အီမွေးတဲင် ထွာစွဉ်ႏ တသီႏအဖိုꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။
ကမ္ဘာႏလောင်း ကဆို့ꩻအာဒါႏ ယာဖေင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ မျန်မာ၊ ကိုလံဘီယာ၊ အေင်ဒိယ၊ အီရန်၊ တူရကီ၊ မဲက်သီဒိုးနီးယား၊ ဗူဂေးရီးယား၊ အီဂျစ်၊ အာသျမုဲင်းနား၊ ပါကစ္စတန်၊ ထုဲင်ꩻ၊ တူရကီ တောမ်ႏ ခယ်ႏ ခမ်းထီဖုံႏဒျာႏသွူ။ 
ယာ (ယာမဲ့ထီ- achrymapapaveris) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကသဲင်တခြိစ်ꩻလဲဉ်းဒါႏ အစီႏဒျာႏတဲင် လꩻလွဉ်ဒျာႏ ယာမွူး (Papaversomniferum) လောင်းသွူ။ ယာကိုနဝ်ꩻ ဖော်ဖဉ်း(Morphine)ဓာတ် (ယာကိုကပါဒါႏ နုဲက်ထရိုစဉ် ဩဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်ꩻ) အဝ်ႏပါသော့ꩻ ၁၂ % တဲင် နေးတောမ်ႏ ဓာတုဗေဒ အနယ်ꩻပညာႏတဲင် ဖန်ဆင်ꩻခွုမ်မာꩻသမ်းထဲင်းယင်း အစွိုးစွိုးတဲင် ထေလꩻလွဉ်ပါ တရာꩻတဝင်ႏတဝ်း မူယစ်ဆေးဆေꩻကွက်ꩻကို ကထွာဒါႏ ဟီရိုအဉ်း (Heroin- C21H23NO5) နဝ်ꩻသွူ။ ဟီရိုအဉ်းနဝ်ꩻ ပွာꩻဖေႏနွောင်ꩻအာႏ ၂ဆ သွူ။ ယာအစီႏကိုနဝ်ꩻ ကိုဒေင်း (codeine) တောမ်ႏ မူးယစ်တခြိုꩻဖုံႏ တပါတဝ်းဒါႏ ပါပါဗာရင်း (papaverine)၊ တီဗေင်း (thebaine) တောမ်ႏ နော်စ်ကပင်း (noscapine) နုဲက်ထရိုစဉ် ဩဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်ꩻဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ယာစီႏနဝ်ꩻ ခြဲစ်ꩻကဲစ်ꩻယာရာႏတွော့ꩻ လꩻလွဉ်ဒါႏ အစီႏမန်ꩻယို အွဉ်ႏလိုသဲင်တွော့ႏ လꩻလွဉ်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ မီကိုနီယမ် (Meconium) နဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ယာမွူး အခဝ်အလင်ကို မွေးတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ ယာမွူးခွိုꩻဖြယ်အလင်ကို ကလꩻလွဉ်ဒါႏ တခြိုꩻဖုံႏအကျောင်ꩻ သမဲင်ꩻအလꩻ အဝ်ႏယီးနယ်ခါꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။
ခေတ်တသာယိုခါနဝ်ꩻ နေးတောမ်ႏ ဓာတုအနယ်ꩻပညာႏအစွိုးစွိုးတဲင် အဝ်ႏယာတသဉ်၊ ယာစီႏ ယာဖြေင်းယို ဒွိုႏလွေꩻ ထေလွေꩻသမ်းယင်း ယာဗွာ ယာမား ယာလံ၊ အအံႏအအွꩻ၊ တသီႏတဖေင်ꩻ၊ တသီႏစွုန်း၊ စတဲင် မူးယစ်ဆေးတခြိုꩻ အမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏတဲင် နေင်ႏတရေင်အကို ထွာစွဉ်ႏ ထေယာတခြိုꩻ အထင်ႏထိုသွတ်ꩻ ခေတ်တခေတ်နဝ်ꩻသွူ။ နေးတောမ်ႏ အနယ်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻ အဝ်ႏနွို့လွဉ် နီနာꩻသီးအခါႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻတဲင် နီနမ်းတောမ်ႏနီနမ်း ဆင်ႏချင်ႏချာမꩻ မွေးတဝ်းနဝ်ꩻ ဖဝလဲ့ကုဲင် အသောင်အရင်ꩻသားလဲ့ အီႏယပ်ꩻလွဉ်ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပွိုးတောမ်ႏ ဖေင်ꩻဖင်ꩻ ယာလံ ယာမား ယာဗွာ စတဲင် တခြိုꩻယိုစားဖုံႏ ယံကထူႏသုင်ꩻမွုန်းဝင်ꩻ ယံဖြေꩻစာကူꩻကားမွုန်းဝင်ꩻ ဖေႏအာႏမွုန်းတဝ်းဝင်ꩻတာႏ နေးတောမ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏဖေႏပညာႏ ဒေါ့ꩻခြုဲင်းနယ်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻအကို နေးတောမ်ႏလိတ်ယာႏ ကဖေႏပညာႏဒါႏ လိတ်ယာႏကဗျာတခူးတခဝ်ယို အဝ်ႏလ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ(နျꩻလိတ်ဖြုံႏသွမ်ႏနဝ်ꩻတဲင် နွို့ထွားနွောင်ꩻဒျာႏဝင်ꩻသွူ)-
↑ Professor Arthur C. Gibson။ The Pernicious Opium Poppy။ University of California, Los Angeles။ 27 June 2016 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 21 November 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Opium definition။ Drugs.com။
↑ Sawynok J (January 1986). "The therapeutic use of heroin:areview of the pharmacological literature". Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 64 (1): 1–6. doi:10.1139/y86-001. PMID 2420426.
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/ယာ&oldid=5359390"
Last edited on 10 March 2022, at 13:30